Nhau dzeBhaibheri: Stefano Anotakwa Namabwe - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Munhu akagwadama pano ndiStefano. Mudzidzi akatendeka waJesu. Asi tarira chiri kuitika kwaari zvino! Varume ava vari kukandira mazidombo kwaari. Vanovengereiko Stefano zvikuru zvokuti vari kuita chinhu ichi chinotyisa? Ngationei.
Mwari ave achibetsera Stefano kuita manenji anoshamisa. Vanhu ava havazvidi, nokudaro vanopinda munharo naye pamsoro pokudzidzisa kwake vanhu zvokwadi. Asi Mwari anopa Stefano uchenjeri hukuru, uye anoratidzira kuti varume ava vave vachidzidzisa zvinhu zvenhema. Ikoku kunotovatsamwisa kwazvo. Saka vanomubata, ndokudana vanhu kuzoreva nhema pamsoro pake.
Muprista mukuru anobvunza Stefano kuti: 'Zvinhu izvi ichokwadi here?' Stefano anopindura nokukurukura hurukuro yakaisvonaka inobva muBhaibheri. Pamugumo wayo, anozivisa kuvenga kwaiita vanhu vakaipa vaprofita vaJehovha kare kare. Ibvei oti: 'Imi makafanana chaizvo navanhuvo. Makauraya mubatiri waMwari Jesu, uye hamuna kuterera mitemo yaMwari.'
Ikoku kunoita kuti ava vatungamiriri vorudzidziso vatsamwe kwazvo! Vanogeda-geda meno avo mukutsamwa. Asi zvino Stefano anosimudza musoro wake, ndokuti: 'Tarirai! ndinoona Jesu amire kurudyi kwaMwari mudenga.' Pana ikoku, varumevo vanodzivira nzeve dzavo ndokumubata vachimuzvuzvurudzira kunze kweguta.
Pano vanopfekenura nguvo dzavo ndokudzipa jaya Sauro kudzitarisira. Unoona Sauro here? Ipapo vamwe vavanhuvo vanovamba kukandira mabwe kuna Stefano. Stefano anogwadama, sezvaungaona, uye anonyengetera kuna Mwari: 'Jehovha, musavarangira chinhu chakaipa ichi.' Anoziva kuti vamwe vavo vakanyengedzwa navatungamiriri vorudzidziso. Pashure pakwo Stefano anofa.
Apo mumwe munhu anokuitira chinhu chakaipa, unoedza kumukuvadzawo here, kana kuti kukumbira Mwari kuvakuvadza? Handizvo zvakaitwa naStefano kana kuti Jesu. Vaiva nomutsa kunyange kunavasaiva nomutsa kwavari. Ngatiedzei kutevedzera muenzaniso wavo.
Stefano ndiani, uye Mwari ave achimubatsira kuitei?
Stefano anotaurei zvinotsamwisa vatungamiriri vechitendero?
Varume pavanozvuzvurudzira Stefano kunze kweguta, vanoitei kwaari?
Mumufananidzo, murume muduku akamira pedyo nenguo ndiani?
Asati afa, Stefano anonyengetera kutii kuna Jehovha?
Tichitevedzera Stefano, chii chatinofanira kuita apo mumwe munhu anotiitira chinhu chakaipa?
Verenga Mabasa 6:8-15.
Mabasa api ounyengeri ave achishandiswa nevatungamiriri vechitendero kuedza kumisa basa rokuparidza reZvapupu zvaJehovha? (Mab. 6:9, 11, 13)
Verenga Mabasa 7:1-60.
Chii chakabatsira Stefano kuti abudirire mukudzivirira mashoko akanaka pamberi peSanihedrini, uye tingadzidzei mumuenzaniso wake? (Mab. 7:51-53; VaR. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pet. 3:15)
Tinofanira kuva nemaonero api kune vanoshora basa redu? (Mab. 7:58-60; Mat. 5:44; Ruka 23:33, 34)